Chelsea Oo Xiiseyneysa Saxiixa Xiddiga Bayern Munich Jerome Boateng
Home Suuqa kala iibsiga Chelsea oo xiiseyneysa saxiixa xiddiga Bayern Munich Jerome Boateng
Chelsea ayaa ku raad joogta xiddiga Bayern Munich Jerome Boateng , iyadoo tababaraha cusub Thomas Tuchel lagu soo waramayo inuu taageere u yahay ciyaaryahanka.
Sida laga soo xigtay Bild , Chelsea ayaa isha ku heysa xaalada Boateng ee Bayern Munich, iyadoo daafaca dhexe uu qandaraaskiisa dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedkaan.
Tababaraha Chelsea Thomas Tuchel ayaa la sheegay inuu taageere u yahay Boateng, waxaana jiray soo jeedino ku saabsan in tababaraha reer Jarmal uu isku dayay inuu la soo saxiixdo 32 jirkaan intii uu tababaraha u ahaa Paris Saint-Germain.
Boateng ayaa Bayern Munich kaga soo biiray kooxda Manchester City sanadkii 2011, wuxuuna u ahaa xiddig ku fiican iyaga. Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Jarmalka ayaa saftay 346 kulan tartamada oo dhan, waxaana uu udub dhexaad u ahaa guulaha Bayern Munich sanadihii ugu dambeeyay.
Xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, Boateng wuxuu qeyb muhiim ah ka ahaa kooxda Bayern Munich oo ku guuleysatay seddexleey markii uu maamulayay Hansi Flick.
Previous articleWararka Xanta Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee maanta: Haaland, Alaba, Salah, Mbappe, Upamecano, Sule, Lingard
Next articleOle Gunnar Solskjaer oo ka hadlay Mustaqbalka Pogba iyo Heshiiskiisa Cusub